Ingersoll Rand Air Oil Separators - China Airpull (Shanghai) Myọcha
Nke a Ingersoll Rand ịghasa ikuku Compressor raara ikuku mmanụ separator emetụta ndị ultra-ezi iko eriri arụpụtara site American HV ma ọ bụ Lydall Company. Ọ bụ iji wepu dịkarịa ala 99.9% nke vaporous mmanụ mixtures si abịakọrọ ikuku. Ke adianade do, e mepụtara ọhụrụ abụọ-akụrụngwa nyagide nke na-abịa na elu bonding ike, a na-eji ekwe ka separator na-arụ ọrụ na-ejikarị ọbụna n'okpuru okpomọkụ nke n'elu 120 ℃.
Ọzọkwa, a na ụdị ikuku mmanụ separator nwere ike ịbụ mpụga ma ọ bụ wuru na-ụdị. Na fọrọ nke nta ka afọ 20 nke n'ichepụta ahụmahụ, anyị ụlọ ọrụ bụ maara na ọtụtụ puku ndị mmepụta teknụzụ. Ya bụ, anyị nwere ike na-enye elu-ọkwa OEM ọrụ. Anyị na-ike chepụta separator eji maka ịghasa ikuku Compressor nke ọ bụla ika, ihe atụ, Atlas Copco, Sullair, Fusheng, Tụlee, wdg
Ngwaahịa a na-eji micron iko eriri ikewara vaporous mmanụ si abịakọrọ ikuku. Mgbe nnukwu mmanụ tụlee coalesced si vaporous mmanụ ga-akwakọba n'okpuru emetụta nke ike ndọda. N'ikpeazụ, na-akwakọba mmanụ ga-atụgharị ka mmanụ akara nke Compressor. Na nke a, a micron nkewa ebenata mmanụ oriri nke ikuku Compressor.
1. Mbụ saturation Pressure dobe: ≤0.02 MPa
2. The Oil Content mgbe Ndị Hapụrụ: ≤5 ppm
3. ikpe na nsogbu dobe dịghị ihe karịrị 0.1MPa, mmanụ separator ike ga-eji maka dịkarịa ala 4,000 awa.
Kwuru: n'elu parameters na-nwetara n'okpuru ọnọdụ nke gosiri na-arụ ọrụ nsogbu na gosiri eruba. E wezụga nke ahụ, ndị kacha okpomọkụ bụ ọ dịghị ihe karịrị 120 ℃. Na DAH lubrication mmanụ chịrị GB / T7631.9-1997 na-eji. Tupu nkewa, mmanụ ọdịnaya bụ ọ dịghị ihe karịrị 3000ppm.
Original Part Mba AIRPULL Part Mba
Centrifugal Oil separator | Rotary ịghasa Compressor Ngwa | Air Compressor nkesa
Osote: Atlas Copco Air Oil Separators
Abac mapụtara Part
Air Compressor iyo na separator
Almig mapụtara Part
Alup mapụtara Part
Atlas Copco Mmezi Kit
Atlas Copco mapụtara Part
Atlas Copco valvụ
Boge mapụtara Part
Chicago Pneumatic mapụtara Part
Compair mapụtara Part
Compressor iyo na separator
Elgi mapụtara Part
iyo na separator Factory
iyo na separator N'ihi Sale
iyo na separator Manufacturer
iyo na separator Supplier
Fusheng mapụtara Part
Gardner Denver Mmezi Kit
Gardner Denver mapụtara Part
Gardner Denver valvụ
Hitachi mapụtara Part
Ingesoll Rand Mmezi Kit
Ingesoll Rand mapụtara Part
Ingesoll Rand valvụ
Kaeser Mmezi Kit
Kaeser mapụtara Part
Mitsui Seiki mapụtara Part